Ciidanka kumaandooska danab oo howlgalo lagu beegsanayo argagixisadda shabaab ka fuliyey gobolka Shabeellada dhexe “Sawirro” | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Jowhar-(SONNA)-Ururka 7-aad ee Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Danab, ayaa howlgallo qorsheysan oo lagu baacsanayo argagixisada arxanka darran ee Alshabaab waxaa ay maanta ka sameeyeen deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Hirshabeelle.
Goobaha Hawlgalkaan qorsheysan laga sameeyey ayaa waxaa ka mid ah Mareerey, Sabuun, Baaroow Madiina cade, Gaaleef iyo Buurdhee, waxaana dhammaan deegaanadaan ay hoostagaan gobolka shabeelada dhexe.
Argagixsada Alshabaab ayaa howlgalkaan lagu gaarsiiyey Khasaare Xooggan, waxaana ururka 7-aad ee Kumaandooska Danab ay burburiyeen baro nabad diidku ay deganaayeen oo ay ka soo abaabuli jireen dhagaraha dadka aan waxba galabsan ee shacabka ah lagu dhibaateeyo.
Ku simaha taliyaha guutada 16-aad ee Kumaandooska Danab Dhamme Xasan Maxamed Cismaan “Xasan Tuure” ayaa sheegay in ururka 7-aad ee Danab ay guulo la taaban karo ka soo hoyeen howlgaladaan, isaggoo xusay in la joogteyn doono weerarada iyo hawlgalada Qorsheysan ee lagu dhabargoynayo argagixisada Baxsadka ah.
Ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Danab ayaa sidaan oo kale horey u fuliyey hawlgalo badan oo lagu dilay Horjoogeyaal sare iyo maleeshiyaad ka tirsan Argagixisada.
Previous articleDowladda Turkiga oo cambaareysay falkii argagixisanimo oo maanta ka dhacay Muqdisho
Next articleRa’iisul Wasaare Rooble oo Cusbitaal Madiina ku booqday dhaawacyada dhallinyaradii ku dhaawacmay qarixii argagixisanimo
Habraaca Xallinta Khilaafaadka Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Sooma...